Filtrer les éléments par date : samedi, 03 octobre 2020
samedi, 03 octobre 2020 18:38
Manana 500 000 licenciés raha ny 10 taona lasa fotsiny no jerena
Pilo kely: Manana 500 000 licenciés raha ny 10 taona lasa fotsiny no jerena, ingénieurs, médecins, agronomes tsy an'asa, manana 5 000 cerveaux efa nisoratra anarana, gouverneur 4 tsy voatendry efa herin-taona, trouver l'erreur.
Tafandria mandry e
samedi, 03 octobre 2020 18:20
Masoivoho Indianina: Tsy miankin-doha amin’ny JIRAMA fa mampiasa angovo avy amin’ny herin’ny masoandro
Nankalaza ny faha-150 taonan’i Mahatma Gandhi ny teo anivon’ny Masoivohon’i Inde eto Madagasikara.
Tonga nanome voninahitra ny lanonam-pamaranana teny amin’ny Masoivoho Indianina Antsahavola ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian, izay notronon’ny Minisitry ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana ho Lovainjafy Raharinirina Baomiavotse Vahinala.
Namanarika ity fankalazana ity ny fitokanana ny dingana goavana nataon’ny eo anivon’ny Masoivoho Indianina eto Madagasikara amin’ny fampiasan'izy ireo ny angovo azo havaozina, izay azo avy amin’ny herin’ny masoandro.
samedi, 03 octobre 2020 18:09
Jérôme Mombris: Voamarina fa mitondra Covid-19 taorian’ny fitiliana PCR natao azy
Namoaka fanambarana ny Grenoble Foot 38, klioba frantsay ilalaovan’i Jérôme Mombris fa mitondra Covid-19 ity farany taorian’ny fitiliana PCR natao azy. Misy mpilalao roa hafa sy mpitantana ny klioba ihany koa voa.
Mpilalao isan’ireo nantsoin’i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea an’i Madagasikara, hiatrika ny fampivondronana sy nanao fanomanantena any Luxembourg mialoha ny hiatrehana ireo lalao roa mandroso sy miverina hifandonan’ny Barea amin’ny Elefatan’i Côte d’Ivoire amin’ny volana novambra i Jérôme Mombris.
Vodilaharana ao amin’ny Barea izy, isan’ireo nandrafitra ny ekipam-pirenena Malagasy niatrika ny CAN 2019.
samedi, 03 octobre 2020 14:46
RNM - TVM: Nodimandry tany Frantsa i Rasoabakobako
Rasoanarimalala Jeanne no tena anarany, Rasoabakobako kosa no nahafantaran’ny maro azy teo amin’ny sehatry ny haino amanjery.
Izy no mpanolotra voalohany tao amin'ny Televiziona Malagasy tany amin'ny taona 1967.
Nandritra ny 25 taona dia nanafana fandaharana fanabeazana sy kolontsaina tao amin'ny Radio Nasionaly Malagasy izy. Isan'ireny ny fandaharana "Haody Rasoabakobako".
98 taona i Rasoabakobako no izao nodimandry tany Frantsa izao.
Manana ny mari-boninahitra "Commandeur de l'Ordre Nationale" izy.
samedi, 03 octobre 2020 14:30
Ananambo: Sakafo tena be otrikaina ny raviny
Avo dia avo tokoa ny tahan’ny otrikaina hita amin’ny ravin’ananambo na anamirôngo (moringa).
Avo 25 heny noho ny an’ny epinara ny tahan’ny vy entiny.
Avo 4 heny noho ny an’ny atody ny tahan’ny proteina ao aminy.
Avo 7 heny noho ny an’ny voasary laoranjy ny vitamina C ao aminy.
Avo 10 heny noho ny an’ny karaoty ny tahan’ny vitamina A ananany.
Avo 15 heny noho ny an’ny akondro ny tahan’ny potasiôma ao amin’ny ravin’ananambo.
Avo 17 heny noho ny an’ny ronono ny tahan’ny kalsiôma ao aminy.
samedi, 03 octobre 2020 14:16
Electricité: La Jirama dotée de gros groupes électrogènes
De gros groupes électrogènes continuent d’arriver pour renforcer la production de la société d’Etat Jirama.
Un de ces gros matériels était, acheminé sur Antananarivo depuis le port de Toamasina à bord d’un convoi exceptionnel escorté par des militaires les 18 et 19 septembre.
L’acquisition de ces biens de production se fait dans le cadre du Projet d’amélioration de la gouvernance et des opérations du secteur électrique (PAGOSE) financé par la Banque mondiale à hauteur de 65 millions de dollars.
Le projet initial approuvé le 23 mars 2016 par le conseil d’administration de la Banque était prévu pour trois ans.
Mais, à son stade actuel, il s’étendra jusqu’au 31 décembre 2021.
samedi, 03 octobre 2020 14:13
Ambatoloana Manjakandriana: Mpandeha 9 naratra mafy, montsana ny fiara
“Ahoana no hataoko manoloana izao loza izao ? Ao anatin’ny tsy fananam-bola mihitsy aho izao. Izaho no tompon’ny fiara”, hoy ity lehilahy iray rehefa teo amin’ilay toerana nitrangan’ny loza ny zoma 2oktobra tamin’ny 3 ora tolakandro.
Fiara Sprinter mpitatitr’olona niainga tany Fenoarivo Atsinanana ny alakamisy hariva no nandona ny vodin’ny fiarabe (porte-char) nijanona amoron-dalana tao Ambatoloana Manjakandriana ny zoma tamin’ny 3 ora sy sasany maraina teo.
Mpandeha miisa 9 no fantatra fa naratra mafy, ka voatery nentina namonjy toeram-pitsaboana haingana.
Montsana tanteraka noho ny hamafin’ny dona ny fiara nandehanan’izy ireo ary mbola hita miparitaka ny voandalan’ny mpandeha sy ny tavoahangy misy ranom-boakazo nosotroina teny an-dalana mbamin’ny ampahan’entana.
samedi, 03 octobre 2020 08:41
Carte Visa Mvola: Tena tsara ny firosoana amin'ny payement électronique
Anisan'ny ventin-teniko mandrakariva ny firosoana amin'ny payement électronique toy ny banking money, carte électronique.
Mahafaly ny firosoan'ny Mvola amin'ny fanomezana tolotra Carte Visa international, izay ahafahana maka vola na aiza na aiza maneran-tany amin'ny alalan'ny distributeur automatique Visa.
Tsara ihany koa ny fahafahana mampiasa ilay carte Mvola amin'ny fividianana entana amin'ireo mpivarotra manana terminal Visa TPE, sady mampihena ny tsy fandriam-pahalemana ireny satria lavitry ny fikirakirana vola be an-tanana.
Tsara ihany koa ny carte Mvola satria afaka hividianana entana na service amin'ireo mpivarotra eny amin'ny internet na vente en ligne.